Semalt: Virosy Virjiny tokony hataon'ny olona tsara
Jason Adler, Semalt Mpitantana Success Successor, dia nilaza hoe: "Afaka nijery sarimihetsika" Legend aho "andro vitsy lasa izay ary nahavariana ny nakana ny zombies. sarimihetsika, ny governemantan'i Etazonia dia manamboatra viriosy tsara izay manakana ny viriosy rehetra tsy miteraka amin'ny olona. Raha vantany vao entina amin'ny vatan'ny olona io virosy io, dia tsy voan'ny aretina izy ary tsy ilaina intsony ny fitaovana entina hanamafisana ny fahasalamany. dia nihevitra tsara nandritra ny taona maro mandra-pitenin'ny olona ny vokatry ny otrik'aretina. "Nilaza izy ireo fa ny virosibe dia nanomboka nanimba ny taova ary nanodina azy ireo tamin'ny maty.
Ny tantaran'ity sarimihetsika ity dia natolotr'i Will Smith, izay nitana ny andraikitra voalohany. Niasa tamina mpahay siansa izy, nanompo tao amin'ny laboratoara tao amin'ny governemanta. Niasa tamina tetikasa isan-karazany izy ary niezaka ny hahita ny vahaolana amin'ny olana izay namorona korontana tao New York City. Ny toetra tena izy dia nomena tamin'ny laboratoara iray samihafa izay nanatanterahan'i Will Smith ny fitsapany tamin'ny virosy. Na dia tsy tsara loatra aza ny fiafaran'ilay sarimihetsika, dia nahatonga ahy hieritreritra fa ny teknika iray ihany dia azo ampiasaina amin'ny ordinatera sy ny fitaovana finday.
Andeha hojerentsika fa ny olona voan'ny aretina dia solosaina. Ny viriosy tsara dia miditra amin'ny rafitry ny ordinatera ary manimba antontan-taratasy marobe..Manjary mahasosotra ny servers izy raha tsy misy ny fahalalanao sy ny fiarovana ny angon-drakitra. Na ny toro-hevitra farany momba ny fiarovana aza dia tsy misy dikany ary tsy manome antoka ny vokatra tsara.
Niteny tamiko ny olona maro fa tokony hohazavaina avy hatrany ilay aretina, saingy sarotra ny manao izany. Raha misy olona manana virosy maherin'ny telo arivo sy maherin'ny zato an-tapitrisany mitsofoka ao amin'ny ordinaterany, dia tsy afaka manaisotra azy ireo miaraka amin'ny programa antoko Antivirus. Na ny fitaovana tsara indrindra, anisan'izany ny Malwarebytes, dia mety tsy afaka hiatrika io olana io. Indrisy fa lasa mahery sy mahery noho ny hatramin'izay ny virosy maoderina. Mampiasa Malwarebytes aho mba hamoronana làlana ho an'ny programa AV mba hametrahana. Tsy azoko hoe nahoana ianao no mitantana ny ordinateranao nefa tsy mahafantatra ny fototry ny programa antivirus. Misy fandaharana tsara sy ratsy. AVG Free, ohatra, tsy mandoa vola sy miasa tsara. Saingy noho ny antony sasany, ny manam-pahaizana dia tsy manoro ity rindrambaiko ity, ary tsy afaka mampiroborobo ny virosy maneran-tany izany.
Noho izany, ny tetikasako miafina dia mety hanome ny valiny tadiavina efa vita. Ny tetikasa tsy fantatra anarana dia hamerina ny viriosy izay manimba ny fitaovana elektronika tsy misy fahalalana. Raha vao tafapetraka, dia hiaro ny rakitra misokatra, ny fakan-tsarimihetsika fototra, ary ny fahatsiarovana ary hanakana ny fanombohan'ny viriosy rehetra. Tsy hanakana ny fanafihana fanafihana, fanafihana phishing ihany koa izany, fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandaharako sy ny fandaharan'asa hafa dia ny fametrahana azy haingana. Ny famerimberenan'ny tenanao amin'ny alàlan'ny mailaka, ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy sy ny hafatra an-tserasera dia azo atao. Tokony hiady amin'ny viriosy ianao ary hiaro ny fitaovan'ny ordinatera amin'ny zavatra mampidi-doza. Noho izany, tokony hametraka ny programa ianao ary mandefa jiro amin'ny rafitra. Noho ny olana ara-pitsarana sasantsasany dia mikasa ny hiato io tetikasa io aho, saingy manantena ny hanombohana azy amin'ny ho avy aho rehefa vita ny olana Source .